Vaovao - Ahoana ny fampiasana bisikileta hampihenana ny tavy amin'ny fomba mahomby amin'ny ririnina?
Ny fomba fampiasana bisikileta hampihenana ny tavy amin'ny fomba mahomby dia ahiahy nandritra ny taona maro. Ny toetrandro mangatsiaka, indrindra indrindra, dia manampy fanamby bebe kokoa amin'ny fihenan'ny tavy. Amin'ireo fanatanjahantena mamoaka tavy rehetra, ny bisikileta hampihenana ny tavy no safidy tsara indrindra amin'ny fampihenana ny tavy amin'ny ririnina, satria misy fiatraikany kely amin'ny vatana izany, tsy ho mora reraka, ary tena mahaliana.
Na dia mampihena ny lanjanao aza ny fampihenanao ny kaloria, ny lanjanao very dia misy hozatra hozatra ankoatra ny tavy, ary ireo bisikileta izay tsy mihinana afa-tsy ny sakafo ihany no hihamalefaka ary hihamalefaka kokoa, nefa hihamalemy sy hihisatra noho ny teo aloha koa izy ireo. Satria ny mpihinana sasany aza manana toe-javatra mampihena ny lanjany nefa miakatra ny tahan'ny tavy amin'ny vatany. Aza adino koa fa ny hozatra dia mandoro tavy. Arakaraka ny maha-hozatra anao amin'ny vatanao no mampanjifa ny kcal anao. Raha hozatra ny ampahany amin'ny lanjanao very, dia mety hihabe kokoa noho ny taloha ianao rehefa miverina amin'ny fihinanao taloha.
Bisikileta, bisikileta, bisikileta bebe kokoa, ny zava-dehibe holazaina intelo. Matetika, ny ankamaroan'ny fety amin'ny arabe dia mandoro 40 kcal isaky ny kilaometatra. Raha manisa amin'ny 15 kilaometatra isan'ora ianao dia afaka mandoro 6.000 kcal isan-kerinandro mandritra ny 10 ora isan-kerinandro. Tsy tsara tarehy ve? Alao ny fiaranao ary mivoaha avy ao an-trano!
Ny aerobika dia saika maty am-baravarana tokony ho roa na intelo isan-kerinandro, ary ny bisikileta, na isan'andro aza, dia tsy olana velively. Na dia tsy misy "fanatanjahan-tena takiana!" “Ny sitrapo dia afaka mamono tsikelikely tsikelikely amin'ny fiainana mahazatra ihany koa. Ny fihazakazahana 10km dia mety ho reraka, fa ny mitaingina bisikileta dia "rantsana ambony". Mety ihany koa ny mandeha mitsangatsangana amin'ny bisikileta amin'ny andro tsy fiasana.
Torolàlana fampiofanana momba ny fampihenana tavy isam-bolana
1. teboka fanombohana mandritra ny herinandro 1-2 bisikileta
1) Mitaingina bisikileta mandritra ny 20 minitra × 2 ka hatramin'ny 40 minitra isan'andro
Ny dikany fototra amin'ny fanatanjahan-tena aerobika dia ny mitazona fanatanjahan-tena mandritra ny fotoana lava kokoa amin'ny fikapohana miadana. Rehefa dinihina tokoa, very maina ny mandeha bisikileta hivoaka indray mandeha mody ao anatin'ny 5 minitra sy 10 minitra.
Ireo vao manomboka dia afaka mitaingina mandeha iray arakaraka ny daroka nataony, izany hoe 20 minitra eo ho eo. Làlana iray 20 minitra, roa-lalana dia 40 minitra. Milanja 50kg, ny kcal lany dia: 10km / hx 140 kcal, 13km / hx 175 kcal, 16km / hx 210 kcal, sns.
Ny paika fanaovana kajy ny fanjifana ny kcal dia: kcal (kcal) lany, hafainganam-pandeha (km / h) × lanja (kg) × 1,05 × fotoana bisikileta (h).
2) Làlana maharitra 90 minitra avy amin'ny faran'ny herinandro ady
Misafidiana andro amin'ny faran'ny herinandro ary afaka mitaingina lavitra mandritra ny adiny iray amin'ny halavirana lavitra, manova ny toe-tsainao avy hatrany. Misafidiana mitaingina bisikileta mety eny amin'ny valan-javaboary na lalan-kely voatokana ho an'ny ony ary afaka mitaingina efa ho 90 minitra ianao (ao anatin'izany ny lalana hiverina).
Rehefa tsemboka dia tokony hatao rehydration ara-potoana. Misotroa rano iray vera alohan'ny bisikileta, ary tsara kokoa ny mitondra kettle eny an-dalana isaky ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Manolo-kevitra ny hisafidy ny sabotsy, ny alahady sisa, any an-trano fotsiny hikarakarana tsara ny vatana sy ny saina. Fiheverana momba ny fiarovana Ny bisikileta dia tokony halefa amin'ny làlana tsy misy môtô na bisikileta amin'ny làlambe, misafidy làlan-kaleha tsy misy fifamoivoizana arak'izay azo atao, ary hialana amin'ny mpandeha an-tongotra arak'izay tratrany amin'ny sisin-dalana ahafahany mitaingina.
2. Ampitomboy ny habetsaky ny fanatanjahan-tena amin'ny herinandro 3-4
Tanjona: adiny 1 matetika, adiny 2 amin'ny faran'ny herinandro
Rehefa avy zatra bisikileta ianao dia afaka manafaingana tsikelikely sy manitatra ny dia bisikileta arakaraka ny toe-javatra iainanao manokana. Mikendry farafahakeliny 1 ora isan'andro. Aza miala sasatra amin'ny faran'ny herinandro ary miezaha hihazona ny bisikiletanao mandritra ny 2 ora. Mba hisorohana ny havizanana mandritra ny dia, tandremo ny famerenan'ny rano amin'ny tena izy mandritra ny diany, na misotroa zava-pisotro misy alikaola.
Ahoana ny fanatanterahana iray volana, ahena 2kg:
Ny tavy 1kg dia manodidina ny 7.200 kcal ary ny tavy 2kg dia manodidina ny 14 400 kcal. Azo ahena ao anatin'ny iray volana ve ireo?
Araka ny fomba etsy ambony, ao anatin'ny tapa-bolana arakaraka ny hafainganam-pandehan'ny 13 km isan'ora, ny hafainganam-pandehan'ny herinandro 16 km isan'ora, 14 andro ny fanjifana kcal kajy 2,695 kcal kajy, iray volana afaka mihinana 7.105 kcal, izany hoe, afaka mampihena ny vatana tavy 1 kg. Ny 1kg sisa dia tsy maintsy ahena amin'ny fiaraha-misakafo, ary fatiantoka 243kcal isan'andro no ilaina. Avy eo ny kcal tokony hahena dia 80 kcal isaky ny sakafo.
Ireto misy fomba vitsivitsy hampihenana ny fihinanana kcal:
Misafidiana trondro vaovao: Ny trondro misy trondro vaovao misy menaka fandrahoana dia misy 275 kcal, fa raha vaovao kosa dia 150 kcal fotsiny. (Nihena 125 kcal)
Misafidiana fromazy maina misy atiny ambany tavy: Mampiasà fromazy maina misy tavy 1% fa tsy 4%. (Afaka mamonjy 40kcal ny antsasaky ny kaopy)
Ahenao ny volo: Aza mihinana vary, paty ary paty miampy 1/1 lovia kely. (Nihena 45 hatramin'ny 60kcal)
Misafidiana dibera sy margarine misy tsiro kely: ny sotrokely dibera tsotra sy margarine dia misy 100 kcal, fa ny dibera sy margarine misy tsiro kely fotsiny dia 50 kcal fotsiny. (Mitsitsia 50kcal)
Proteinina ihany no fihinanao: Rehefa mihinana atody dia esory ny yolky ary tahiry 50 kcal isaky ny scoop. (Mitsitsia 50kcal)
Mihinana voankazo fa tsy ranom-boankazo: Ny voasary mahazatra dia misy 60 kcal, fa ny ranom-boasary iray vera kosa dia misy 110 kcal. Misafidiana voankazo vaovao àry! (Mitsitsia 50kcal)
Misafidiana fromazy fanosotra maivana: Sosy fromazy fanosotra kely 2 dia misy 60 kcal, raha ny fromazy fanosotra mahazatra dia misy 100 kcal. (Mitsitsia 40kcal)
Manaova fifanakalozana sakafo tsara: Ho an'ny sakafo maraina na atoandro dia misafidiana tortilla 110kcal fa tsy donut milanja normal. Ny donat dia misy kcal 240. (Mitsitsy 130kcal)
Fitandremana mba hampihenana ny tavy amin'ny bisikileta
1. Ny toerana misy ny seza. Mijoro amin'ny tany ny olona iray ary manainga ny tongony iray, ary ny haavon'ny feny mifanandrify amin'ny tany dia mifanaraka amin'ny haavon'ny seza.
2. Tsy ampirisihina hitondra bisikileta mavesatra (kitapo), fanatanjahan-tena amin'ny bisikileta no faharetan'ny fotoana, raha ny lanjan'ny bisikileta dia mety handratra ny lamosina sy ny hazondamosina.
3. Rehefa ny fanatanjahan-tena hanaovana fonon-tànana ara-panatanjahantena matihanina, ny iray dia mety ho anti-slip, ny roa mety ho amin'ny fararano hiarovana ny tanana fa tsy ny mangana.
Na inona na inona karazana bisikileta alehanao, raha toa ka ilaina amin'ny fihenan-danja ianao dia mila mila refhydration isaky ny 5-10 minitra.
5. Tano foana ny vavanao, ny fitomboan'ny bisikileta dia hahatonga ny filan'ny olona ho tsara kokoa, raha tsy afaka miala amin'ny sakafo be kaloria ianao, mankafy ny sakafo araka ny itiavanao azy, mety ho sarotra ny hahatratra ny tanjona hampihenana ny tavy.
Fotoana fandefasana: Feb-03-2021